Di iche iche na ahia | Martech Zone
Mụ na enyi ọhụrụ m gụrụ akwụkwọ na Diversity. JD Walton. JD amalitela blog nke na-ere ndị ojii na azụmaahịa. Ọ bụ akụkọ ihe ịga nke ọma nke America ma chọọ ịkọ ahụmahụ ya na ndị ọzọ.
O kpalitere m nke ukwuu nke na m nwere dee banyere echiche m banyere di iche-iche. Kedu ihe jikọrọ iche na Marketing na akpaaka? Kedu ihe jikọrọ ya na Doug, nwa nwoke a dị afọ 38 na-acha ọcha? Ihe niile! Mba anyị na ụwa anyị na-adị iche iche kwa ụbọchị. Internetntanetị na-aghọ ezigbo ite agbaze dị ka ọnụ ahịa dị oke ọnụ na ngwaike na-abịakwute igwe mmadụ.
Kwesịrị ịkwanyere ma na-agwa agbụrụ niile, ụkpụrụ okwukwe na ndị nwoke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nke ọma. Ọ bụrụ na azụmahịa gị chọrọ itolite, ụlọ ọrụ gị ga-adị iche iche. Ọ gaghị ekwe omume ijere mpaghara ahịa ahụ ọfụma ma ọ bụrụ na ịnweghị ntinye aka na mpaghara ahịa a.
Fọdụ ndị folks na-ele anya na mmemme dị iche iche wee jiri ya mere ihe ngọpụ maka ịghara ịkwalite ma ọ bụ gwa onye ọzọ okwu na-akwalitebeghị. Ekwenyere m na nke a ga-adị mkpụmkpụ ma eleghị anya ntakịrị amaghị. Dabere na nkwalite na agbụrụ mmadụ, okike, wdg. Nwere ike mepee ohere maka azụmahịa yana mmadụ niile.
Nke a bụ ajụjụ nde dollar… mgbe ụlọ ọrụ gị na-eto nke ọma site na ịkwalite ndị na-pere mpe na nwanyị, ohere ọhụụ ga-abịara onye ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ akwa. Ikekwe ị gaghị enwe ohere ị bulite n'ọkwá na-enweghị ebe ọrụ dị iche iche na mbụ!
Ọkt 22, 2006 na 9:35 AM
Nke ahụ bụ ọkwa na-eche echiche. Echere m na ahịrịokwu ikpeazu gị bụ ngwugwu dị mma.
Nov 11, 2006 na 8:07 PM
Ọ na-abụbu na ịnye ndị pere mpe ego bụ okwu metụtara omume, mgbe ahụ ọ ghọrọ okwu azụmahịa, ugbu a ọ bụ okwu metụtara enweghị ihe ịga nke ọma. N'oge na-adịghị ther ga-abụ ọrụ karịa ndị mmadụ iji mejupụta ha, ọ bụ ihe kpatara ịchụpụ. Doug ị gaghị akpọ onwe gị abụba onye ọcha dị afọ 38, na-ekwu ezigbo mma ma maa mma. Uzo gi nke onwe gi bu ihe di iche iche di iche iche. Imirikiti ụmụ nwoke na-acha ọcha na-eche, ụdị dị iche iche pụtara onye ọzọ, mgbe n'eziokwu, onye ọ bụla dị iche na obodo dị iche iche, nwere afọ dị iche iche, afọ, nha, usoro ezinụlọ, agụụ mmekọahụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana dịka anyị maara nke ọma, okike na agbụrụ. Ezi post